Best MediaCoder Alternative: Faster, More vasatail, More Formats
> Resource> Alternatives> Best MediaCoder Alternative: More Njirimara-Riched All-na-otu Video Ntụgharị
MediaCoder bụ a eluigwe na ala media coder software. Ọ na ejikọ ọdịyo na video technology n'ime kemeghi n'ụzọ na i nwere ike iri zuru akara gị transcoding atụmatụ. Ma ọbụna site na ya onwe mbanye, MediaCoder abụghị kacha mpempe software iji, bụ nke na-adabara beginners. Mmepụta video àgwà dị cumbersome na kwesịrị iji meziwanye ihe.
Ya mere, ọ onye ọzọ MediaCoder software? Ị ga-enwe obi ụtọ ịmara na a kwesịrị ekwesị ọzọ ka MediaCoder bụ n'ezie na Wondershare Video Converter Ultimate for Mac (Windows version dị). Ọ bụ ihe onye ọrụ-enyi na enyi, irè na mfe, na-ewe niile n'ịrụsi ọrụ ike nke nzuzo na-achọta ndị ọhụrụ codec.
Ihe nke a MediaCoder Alternative karịrị echiche
Olee otú iji tọghata Videos na nke a MediaCoder Alternative
Wondershare Video Converter Ultimate Nwere ya atụmatụ a na-apụghị adịkwa site MediaCoder. Biko gụọ n'okpuru iji nweta nkọwa ndị ọzọ.
1. tọghata na 30X Fast Speed
Inwe a nnukwu faịlụ iji tọghata? Ị gaghị mkpa na-eji oge dị ukwuu na video akakabarede. Nke a MediaCoder ọzọ ga-rụchaa converting gị faịlụ na dị nnọọ ole na ole nkeji na ịrịba gbapụrụ ọsọ. Ọzọkwa ị nwere ike mbubata dị ka ọtụtụ videos dị ka o kwere iji tọghata n'otu oge. The software akwado ogbe akakabarede.
2. Ọrụ aga Were Were n'Ọnụ enweghị ihe ọ bụla-emeli
Ị nwere ike zuru ike obi sie na Wondershare Video Convertor Ultimate nwere ike tọghata faịlụ enweghị ihe ọ bụla ókè. Na a ngwa, ị nwere ike tọghata fọrọ nke nta ọ bụla na-ewu ewu video format, dị ka AVI, MP4, MKV, MOV, WMV, VOB, wdg E nweghị erughị eru nke max faịlụ size, dịghị ihe mgbochi na-conversions kwa ụbọchị. Dum na-arụ ọrụ usoro bụ ezigbo na ike.
3. Higher Nchigharị Speed
Nke a MediaCoder ọzọ na-arụ ọrụ na elu na-agba na APEXTRANS ™ technology. Ebe tụnyere akakabarede ọsọ na ndị ọzọ isi converters na ahịa, a MediaCoder ọzọ-enweta nkwanye ha nile. Ọ atọghata 30X ngwa ngwa ọsọ karịa ihe ọ bụla tọghatara na ahịa.
4. Otu All-na-otu Video Ntụgharị
Nke a MediaCoder ọzọ kwesịrị aha nke ịbụ ihe niile na-na-otu Toolkit. The software bụ mwekota nke converting videos, edezi videos, nbudata vidiyo si na video nkekọrịta saịtị, na-ere ọkụ DVD. Ị ga-n'anya na otú vasatail ọ bụ. E wezụga, i nwere ike iji ya tinye metadata gị iTunes nkiri, TV show na n'ụlọ video. -Ekiri ihe nkiri na gị Apple ngwaọrụ ga-abụ ihe na-ụtọ gị.
Wondershare Nwere ndakọrịta na Windows arụ ọrụ usoro, dị ka Windows NT4, 2000, 2003, XP, Vista, 7, na Windows 8. Ọ na-akwado ndị na-iOS dị ka Mac, gụnyere Mac OS X 10.11 (El Capitan), 10.10, 10,9 , 10,8, 10.7, 10.6.
Dị ka m kwuru n'elu, ọ bụ nnọọ mfe iji na onye ọrụ-enyi na enyi interface. I nwere ike dị nweta akakabarede usoro ole na ole clicks.
Nzọụkwụ 1: mbubata gị videos n'ime nke a software site Dọrọ na dobe. Ma ọ bụ i nwere ike pịa "+" ịgbakwunye faịlụ gị.
Nzọụkwụ 2: Họrọ gị chọrọ faịlụ Ọkpụkpọ na mmepụta ebi ndụ.
Nzọụkwụ 3: Pịa tọghatara button na ala nri nke interface.
Wondershare Video Converter Ultimate Bụ a kasị mma ọzọ ka MediaCoder dị ka a dị mfe, ọtọ na mfe iji faịlụ convertor. Ọ na-azọpụta gị a otutu oge ya ngwa ngwa akakabarede ọsọ na-eji ire ụtọ na-arụ ọrụ usoro. Ọzọkwa ọ na-eme ka ndụ gị nnọọ mfe site ya egosipụta ọtụtụ ihe. Dị nnọọ na-aga n'ihu na-enwe-agbalị.